Posted in naag . bannaan . Matrix
aad diiran, Waan jeclahay diiriyo.
Oo midkoodna kama naga mid ma aha tuman.
wadaadkii, Nebi iyo Abwaan
Waxay awoodaan in ay aqoonsadaan kasta noqon doonaa.
Qof kasta nooleeya waxna ma waqti u tudhin,
Si aad u leeyihiin wakhtiga soo socda gurmad iyo.
dhaqdhaqaaqa laxanka – iyo magaca legdinta -
na iftiimiyaa – fursad labaad si aad u heshid.
Sidaas daraaddeed ha nuurka had iyo jeer u iftiimaa
In indhaha jacaylka aad. inta lagu guda jiro this
nolosha, farxad, farxad iyo guul
nuugo Matrix – isu dhali Planet a.
(Marina Tsvetaeva siiyey)
Haweenay la abuuray oo ku saleysan furta. Tani waa qaab dhismeedka qaar ka mid ah, kuwaas oo aad ka dhigi kartaa entries, galaan macluumaadka, macluumaad dukaanka: Qaab dhismeedka bixisaa suurtagalnimada of kaydinta ee xal ahbaa, natiijooyinka rasmi ah. Halkan waa haweenka ee.
Waxaa sidoo kale lagu sheegay qoraalka qadiimiga ah, in qof dumar ah oo – ashuunkeedii this, cup, concavity.
Inkastoo nin raadinayso, formation, macdanta xog muuqaalo kala duwan iyo noocyada – naag u ururiya iyo dukaamada. Hawsha ugu wayn ee haweenka: kaydinta iyo wareejinta macluumaadka la heli karo sida ugu saxsan ee suurtogalka ah, raasamaal ee isku xirka mowduuc.
By kugula hawlaha loogu tala galay iyo naag ujeedada gaarka ah leedahay sifooyinka ku haboon ee u shaqeeyo. Mid ka mid ah taas oo ah “xubin caasiyiinta”. Maxaa, markeeda,, Waxa uu ogolaanayaa in ay u gudbiyaan warbixin joogto ah, ku dhowaad oo aan daaliyaa. jirka dumarka ayaa tiro weyn ee unugyada dareenka.
Qof dumar ah oo had iyo jeer u egtahay si aad u hesho macluumaad cusub iyo aad u badan, waxay ururisaa meel kasta (iyo, xataa, halkaas oo waa wax aan macquul aheyn). Sababta oo ah waxa mararka qaarkood helo galay xaaladaha aan arrin caadi ah, “qaadin” in, sida caadiga ah, ka dibna waxa loo baahanyahay in ragga.
Mararka qaarkood dumarka waa sida degree weyn oo cajiib, in xaaladaha sirgaxan waxaa laga yaabaa in caalamka oo dhan. Ka dib markii in ay inta badan diido in la siiyo gargaar si aad u hesho baxay jahwareer ka dhalanaya. Waxa inta badan ka sahlan tahay in la dafiri uu ku xadgudbay iyo siin muuqaalka kore ee is fahan ah, ka badan si dhab ah u qaataan, kuwaas oo gurmad u yimid.
Haweenay doonaya inuu qaato macluumaadka diyaar, xal hore u sameeyay, xarumaha hadda jira. In mabda'a,, in haweenka ururinta iyo faafinta macluumaadka ayaa loo siman yahay ma. dumarka noocan oo kale ah waa.
In saamayn jirto sabab ah, naagtii uu leeyahay qadar weyn ee tamarta. Waa kuwee waa ka xoogbadan, in nin kaydka. Si goan sababtoo ah naagtan waa inay awoodaan inay qabtaan shaqo badan. No-brainer on natiijada ee ay falsayeen. Taasi waxay keeni kartaa dhibaato.
Marka qof dumar ku dhaco dhibaato – waxay u egtahay in ay si deg deg ah u hesho in dhamaadka. Oo, haddii dhamaadka yahay guddiga qiimihiisu – Haweenay doonaysa in ay si deg deg ah jebin on board this. Sayidka inay hoos uga meel dhibaatooyin jebin dayrta. In naagtan ma awoodo in ay ku noolaadaan nolol caadi ah oo aan nin.
laftiisa, naag fudud quruxsan khiyaaneeyey. Oo uusan si fudud oo aan khasab ah. The ugu soo jiidashada badan haweenka asalka Oo qolladaheedii sixir. Iyada oo natiijada cajiib ah oo la saadaalin karo. tusaale ahaan: “Waxaan qaban doonaa hawlgalka ku saabsan DNA, oo aad si indho la'aan dunida ka mid ah sixir iyo cajiib galay!” Sidaas darteed, 70% jidhka baaba'aa, iyo naagtii waxaa cajiib ah Hawiyaha slag la qiyaasi karo. Oo haddii niman Wax dan ah kama ay naag – Waxay sidoo kale quusin, waayo,. Sayidka ilbaxnimo oo dhan ka dhigaysa dabaasha sixir ah in slags cajiib ah ruuxa beenta.
Haweenay kasta oo, iyo sidoo kale shaxda, ku jira, badan waxay ka buuxisay. Haddii qof dumar ah oo jacayl buuxiyey, walxo ka kooban jacayl, Information qooyay oo abuuray by Love – markaas naagta radiates Love. Oo isna wuxuu aad u wanaagsan ayuu falaa. laakiin, haddii qof dumar ah waxaa ka buuxa macluumaad junk, haraaga inferiority – qashinka isku mid ah iyo tamarta u qaybi doonaa.
In daawada, waxaa jira dhaqan ah daaweynta ku tiirsanaanta maandooriyaha. Haweenka ku dhaqanka this cadeeyay inuu yahay in aanay noqon at its ugu fiican. Haddii nin leeyihiin xaaladaha soo kabashada – dumarka qaba dhibaato this. Tan waxa u sabab xasiloonida ee macluumaadka ma aha lafaha. ie. Haweenay ku jira tamar badan, laakiin macluumaad yar Stability. In this, haweenka waa ay fududahay in la isku dubaridi.
Waxay u nugul yihiin tiradeeda, in uu yahay hanti iyaga ee dabiiciga ah. Accounting, qiyaasta, ururinta iyo hawlaha kale. Kuwa xiriirka la leh tiro badan oo “ma culus” walxaha.
Matrix, oo ay ku jiraan tiro badan oo ah noocyada nolosha, Waxay ka dhigan tahay Planet. Sida KOOBAN haweenka Mabda'a naag kasta oo uu leeyahay Energy- Planet. In this, Waxa lagu murmi karaa, haweeneydaasi – Planet this.
Sidee Planet, dhaqaaqin in ay falagiisuu, Haweenay heer tamarta dhaafsiisantahay waa goobo ama giraanta.
naag – dheecaan tamarta joogta ah Adduunka, taas oo ay tahay. caddayn korka sare ah danaha haweenka ka badan, maxaa yeelay, waxay diyaar u yihiin isticmaalka: waxay mar hore lagu dari karaa si furta.
naag – shax. Ujeeddada koowaad – Store iyo Ray jacaylka hooyo.
Qof dumar ah oo hambalyeeyo karaa muddo aan la cayimin. Haddaba ansixiyay Maalinta Haweenka Adduunka ee 8 Martha, waxaad weli soo wici kartaa “xad March”, taas oo waafaqsan tirada hambalyo on maanta.